musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Guinea Kupwanya Nhau » Guinea yakadzinga muAfrican Union pamusoro pesimba rehondo
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Guinea Kupwanya Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Guinea yakadzingwa kubva kuAfrican Union
African Union yakurudzira vatungamiriri vezvematongerwo enyika kuti vavimbise kuchengetedzeka kwemutungamiri akabviswa pachigaro nevamwe vakasungwa.
African Union yamisa kuve nhengo yeGuinea.
Republic of Guinea inomiswa kubva kumasangano ese anotora sarudzo muAU.
AU yakamisa nhengo dzeGuinea zvichitevera kubvuta mawuto kweSvondo rapfuura.
Dhipatimendi reAfrican Union Political Affairs Peace and Security razivisa paTwitter account nhasi kuti sangano ramisa nhengo yeGuinea kubva nemusi weChishanu, nekuda kwemauto achangoburwa munyika iyoyo.
"Kanzuru <…> inosarudza kumisa Republic of Guinea kubva kumabasa ese eAU / masangano anotora sarudzo," iyo African Union meseji inoverengwa.
Nyika gumi neshanu dzakamisa Guinea zvichitevera Svondo kubvuta mauto inotungamirwa naColonel Mamady Doumbouya. Musi waSeptember 5, Colonel Mamady Doumbouya, mukuru wechikwata chevakuru vemauto akanangana neGuinea, akazivisa kusungwa kweMutungamiri Alpha Conde, vanga vari pachigaro kubvira 2010.
Vapanduki vakaumba komiti yenyika yekubatanidza nekusimudzira kweGuinea, vakanzura bumbiro remitemo, vakaputsa hurumende yenyika pamwe neparamende, vakagadza magavhuna emauto, uye vakatara nguva yekudzokera kumba.
Iyo junta yakarairawo bhanga guru kuti riise mari maakaundi ese ehurumende mukuedza kuchengetedza zvinhu zvehurumende uye "kuchengetedza kufarira kwenyika."
African Union yakurudzira vatungamiriri vezvematongerwo enyika kuti vavimbise kuchengetedzeka kwemutungamiri akabviswa pachigaro nevamwe vakasungwa. Conde anoramba ari mumaoko ejunta, avo vakangoti ari munzvimbo yakachengetedzeka aine mukana wekurapwa.